Tüpraşဆွစ်ကုမ္ပဏီ Stadler ကိုသင်ရာမှစက်ခေါင်းတင်သွင်း! .. ကောင်းပြီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသား Hybrid ကိုစက်ခေါင်းအဘယ်သူမျှမခဲ့သလား - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး26 EskisehirTüpraşဆွစ်ကုမ္ပဏီ Stadler ကိုသင်ရာမှစက်ခေါင်းတင်သွင်း! .. ကောင်းပြီ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသား Hybrid ကိုစက်ခေါင်းအဘယ်သူမျှမခဲ့သလား
30 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 26 Eskisehir, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, လှိမ့်စတော့ရှယ်ယာ, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
စက်ခေါင်းကုမ္ပဏီ TUPRAS များအတွက်ဆွစ်ဇာလန်အားကစားကွင်းတင်သွင်းနေကြသည်
Tupras, တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးစက်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, ဆွစ်ဇာလန် Stadler,7စုစုပေါင်းစက်ခေါင်း EURODUAL အမျိုးအစားဝယ်ယူများအတွက်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
သို့သော်ဤစက်ခေါင်းကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအလွန်အဆင်ပြေ Tulomsas ထုတ်လုပ်နိုင် Eskisehir တွင်တည်ရှိပါသည်။
ဤတွင် Aselsan ဂျာမဏီ InnoTrans Tulomsas နှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဝယ်ယူအဆင်းလှသောအချို့နဲ့အခြား Tulomsas ထုတ်လုပ်မှု၏ဥပမာများနှင့်စက်ခေါင်းမှာပြကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသား Hybrid ကိုလုပ်တဲ့စက်ခေါင်းနှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူပင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Iskenderun သံနှင့်သံမဏိ, Tulomsas ခကျြသမ်မတနိုငျငံထက်6600 အပိုင်းပိုင်း EFFISHUNT အမှတ်တံဆိပ်ဟာခေါငျးဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။
ဆွစ်ဇာလန်ရထားထုတ်လုပ်သူ Stadler နှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင် Adapazari ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပါလိမ့်မယ် 25 / 02 / 2016 Stadler နှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင် Adapazari ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပါလိမ့်မယ်ဆွစ်ဇာလန်ရထားထုတ်လုပ်သူ: ဆွစ်ဇာလန်ရထားထုတ်လုပ်သူ Stadler ရထားနှင့်လမ်းရထားစီမံခန့်ခွဲမှု AG က, တူရကီအတွက်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုရှာဖွေနေသည်။ Devine ကုမ္ပဏီနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးများ၏အစာစားချင်စိတ်ကိုသွေး, Adapazari, တူရကီရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် xnumx't ကတည်းကရာ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်။ အစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပမည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမီးရထားxnumx'ncıအတွက် 2003-3 မတ်လ, အလင်းရထား, အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဥရောပအာရှရထားထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတရားမျှတသောလည်းဒီလယ်ပြင်၌အရေးကြီးသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံပါလိမ့်မယ်။ သင်တန်းသားများကိုဆွစ်ဇာလန်ရထား, မက်ထရိုနှင့်လမ်းရထားမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ Stadler ရထားစီမံခန့်ခွဲမှု AG ၏စာရင်းထဲတွင်ထည့်သွင်း, Eurasia ရထားအရှည်အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြသပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကုမ္ပဏီတူရကီအတွက်ကိုယ်စားလှယ်ရှာဖွေနေသည် ...
ဆွစ်ဇာလန် Stadler တူရကီရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြစ်ပါတယ် 31 / 03 / 2016 ဆွစ်ဇာလန် Stadler တူရကီရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျက်ရှိသည်: တူရကီရဲ့မက်ထရိုနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းများန်းကျင်ကြီးထွားလာ, အဓိကအားဖြင့်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မကြာသေးမီနှစ်များတွင်နိုင်ငံခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်။ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်သူကိုလည်းကမ္ဘာကတူရကီမှထုတ်လုပ်ကုမ္ပဏီကြီးများမှကြွလာရှိရာစျေးကွက်၏နံပါတ်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ကနေဒါ Bombardier နဲ့ Talgo စပိန်ရထားထုတ်လုပ်သူဆွစ်ဇာလန်ရထားထုတ်လုပ်သူ Stadler နှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင်တူရကီရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လာပြီးနောက်။ Stadler ဒုတိယသမ္မတ, စျေးကွက်နှင့်အရောင်းဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ပတေရုသ Jenelt ကတူရကီအတွက်ရထားလမ်းကားထဲတွင်အကျိုးစီးပွားကြီးထွားလာနေပါတယ် "ဟုပြောသည်။ TCDD လည်းဤမြေကွက်၌အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွေရှိနေပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့်ပုံစံမ ...
ပင်လယ်ကွေ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် Stadler တူရကီ၏ပထမဦးဆုံး Hybrid ကိုစက်ခေါင်းမှသဘောတူညီချက်ရှိခဲ့သည် 27 / 08 / 2019 Tupras အတွက်ပင်လယ်ကွေ့ပို့ဆောင်ရေးရဲ့ရထားလမ်းကုန်တင်လက်အောက်ခံ, ထုတ်လုပ်သူများ EURODUAL အတွက်စပ်စက်ခေါင်းခုနစ်လုံးအမျိုးအစားများများအတွက်ဆွစ်ဇာလန် Stadler ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူသဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ရှစ်နှစ်များအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသဘောတူညီချက်အပါအဝင် Stadler တူရကီရဲ့စျေးကွက်အတွင်းပထမဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်ထူးရှိပါတယ်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ခေါင်း 2021 အတွက်ကိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကုန်တင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်း Tupras ရထားလမ်းပင်လယ်ကွေ့လက်အောက်ခံ, ဆွစ်ဇာလန်ရထားလမ်းမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ Stadler ခုနစ်ခု co'co '' ဟိုက်ဘရစ်စက်ခေါင်းနှင့် 8 နှစ်အပိုပစ္စည်းအတွက် EURODUAL အမျိုးအစားများနှင့်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုစောင့်ရှောက်မှုသဘောတူညီချက်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ Stadler ဒီသဘောတူညီချက်အောက်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတူရကီအတွက်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် locomotives ...
ခေါငျး၏ EURODUAL အမျိုးအစား
အမျိုးသား Hybrid ကိုစက်ခေါင်း
ဆွစ်ဇာလန်ရထားထုတ်လုပ်သူ Stadler နှင့်ပေါ်လာတာဟာအရင် Adapazari ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပါလိမ့်မယ်
ဆွစ်ဇာလန် Stadler တူရကီရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖြစ်ပါတယ်
ပင်လယ်ကွေ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် Stadler တူရကီ၏ပထမဦးဆုံး Hybrid ကိုစက်ခေါင်းမှသဘောတူညီချက်ရှိခဲ့သည်
အမျိုးသား Hybrid ကိုစက်ခေါင်းဂျာမနီမှာပိတ်ယူ
တူရကီရဲ့အမျိုးသား Hybrid ကို Lokomotif`L ကမ္ဘာပေါ်မှာစတုတ္ထခဲ့သည်
ယူရိုချွေတာသုံးစွဲသန်းပေါင်းများစွာပေးရန်ဒေသခံနှင့်အမျိုးသား Hybrid ကိုစက်ခေါင်း
ပါဝါမှကြမ်းပြင်မှ TCDD ရဲ့အမျိုးသား Hybrid ကိုစက်ခေါင်းပါဝါ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (249) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)